आरएसडिसी लघुवित्तले पारित गर्‍यो १२.६३ प्रतिशत लाभांश
पुस २४, काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेले प्रस्तावित १२ दशमलव ६३ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । कम्पनीले शुक्रवार सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी प्रस्तावित ९ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ३ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ६७ करोड १५ लाख २२ हजारको आधारमा उक्त लाभांश वितरण गर्नेछ ।
सभाले लाभांश सहित गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ भने सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी दुई जना सञ्चालकको निर्वाचन समेत गरेको छ । दुई सञ्चालकमा अमर डंगोल महर्जन र शान्ती प्रसाद उप्रेती निर्वाचित भएका हुन् ।
सभा मार्फत कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६७ करोड १५ लाख २२ हजारदेखि वृृद्धि गरी रू. ७३ करोड १९ लाख ५९ हजार पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गर्दै सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय समेत भएको छ ।
सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १० गते एक दिन बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा पुस ९ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र लाभांश प्राप्त गर्न योग्य भएका छन् ।
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरले १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा दिया निवेदन[२०७७ माघ, १३]
बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको १३औं साधारण सभा फागुन ७ गते[२०७७ माघ, १३]